Veruzhinji Votsamwiswa neMakanzuru Ari Kuputsa Zvivakwa Munzvimbo Dzinotengesera Zvinhu
Chivabvu 08, 2020
Demolitions Harare 3
Masangano anomirira vanotengesa mumigwagwa nemabhizimisi madiki ari kushushikana kuti makanzuru ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzvi zvakavakwa zviri kunze kwemutemo kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura.
Mutungamiriri wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy, Amai Lorraine Sibanda, vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuru hazvina kunaka.
Vanoti gwara rakanaka ndere kuti hurumende nemakanzuru vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevamabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashande sei pasina kuputsirana zvivakwa.
Mukuru wesangangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VaSamuel Wadzai, vaudza Studio7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama neekutengesa mumigwagwa.
Vatiwo vanotarisira kuti vemakanzuru nevemuhurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avari kuita misika.
Mwedzi wapfuura, dare repamusoro rakatambira chikumbiro chekuti vagari vekuChitungwiza neEpworth vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo.
Asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekukutongwa kwematunhu, VaZvinechimwe Churu, vakati makanzuru anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo uye makunzuru aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire hutachiona hwecoronavirus, uho hunokonzera chirwere cheCovid-19.
VaChuru vakati dare repamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo nekudaro makanzuru anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka.
Asi mukuru weChitungizwa Resident Trust kana kuti Chitrest, Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muChitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupazwa kwemisika yavo.
Gweta reChitrest, Dr Tarisai Mutangi, vaudza Studio 7 chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuru avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera chitevedza mutemo.
Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuru inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake kwete kuita zvekumupwanyirwa.
Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanise kuenda kumisika nekudaro makanzuru anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvakare.
Mutauririri wekanzuru weHarare, VaMichael Chideme, vaudza Studio7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuru yavo iri kugadzirawo zvimbo dzekutengesera dzakachena.
Pari zvinho nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwehutachiona hweCoronavirus, uho hunokonzera chirwere cheCovid-19.
Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa.